ERA ELECTRONICA သည်အဝေးမှအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ERA ELECTRONICA သည်အဝေးမှအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်
ERA ELECTRONICA သည်အဝေးမှအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ရန်ထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည်
MEDELLIN, ကိုလံဘီယာ, စက်တင်ဘာ 10, 2020 - နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကိုဖောက်သည်များအားအဆင့်မြင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ AV နှင့်ထုတ်လွှင့်ထုတ်ကုန်များထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် Era Electronica သည်ကိုလံဘီယာရှိထိပ်တန်းဖြေရှင်းချက်ပေးသူဖြစ်သည်။ COVID-30 ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားချိန်တွင် Era သည်၎င်း၏ထုတ်ကုန်များပူဇော်သကာများကိုညှိနှိုင်း။ ဝေးလံခေါင်ဖျားသောလုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်သုံးစွဲသူများ၏လိုအပ်ချက်အသစ်များနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီမှလှည့် မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်'' CV610-UB HD PTZ ကင်မရာများနှင့် MXL မိုက်ခရိုဖုန်းS-AC-360-V2 mics သည်ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး USB AV ဖြေရှင်းချက်များကိုထုတ်ကုန်လိုင်းကဒ်ထဲသို့ထည့်နိုင်သည်။ ဤ USB ထုတ်ကုန်များစာရင်းတွင် Era သည်ဤကြိုတင်မမြင်နိုင်သောအချိန်များကိုဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့်ပညာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ၊ ဝတ်ပြုရာအိမ်များ၊ အစိုးရအေဂျင်စီများနှင့်ထုတ်လွှင့်သူများအပါအ ၀ င်သုံးစွဲသူများကိုအသံဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်သည်။
မာရှယ်နှင့် MXL အသင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည် ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်တွေ့ဆုံခြင်းဖြစ်သည် NAB ပြပွဲEra Electronica မှအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာ Juan Fernando Ospina ကပြောကြားခဲ့သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဗွီဒီယိုမော်နီတာများထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီများ၏ထုတ်ကုန်များသို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီ။ သို့သော် COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုကြားတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလက်ရှိလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အချိန်နှင့်အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Marshall နှင့် MXL သည်ငါတို့၏ထောင့်တွင်ရှိနေပြီးပညာရေးကဏ္ our ရှိဖောက်သည်များ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ဝတ်ပြုရာအိမ်များ၊ ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်အစိုးရအေဂျင်စီများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောအထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန် USB ဖြေရှင်းချက်များကိုပေးနိုင်သည်။ ”
Era Electronica သည်တက္ကသိုလ်များ၊ ကောလိပ်များနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကျောင်းများအပါအ ၀ င်ပညာရေးကဏ္ AV တွင် AV ဖြေရှင်းချက်များအလွန်တရာ ၀ င်ရောက်လာသည်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။ “ MXL ၏ AC-360-V2 mics နှင့်မာရှယ်၏ CV610-UB ကင်မရာများဖြင့်ကျောင်းသားများသည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောသင်ယူမှုဖြစ်သည့်အတွက်စာသင်ခန်းအပြင်အဆင်အတွက်အရည်အသွေးမြင့်သောအသံနှင့်ဗီဒီယိုများကိုပေးနိုင်သည်။ "AC-360-V2 နှင့် CV610-UB စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေးနှင့်ဘက်စုံသုံးမှုတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီးစုစုပေါင်းအထုပ်ကိုထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်"
ထုတ်လွှင့်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက် Era Electronica သည်မာရှယ်၏ CV610-UB ကိုထူးခြားသောဗီဒီယိုအရည်အသွေးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအဖြေတစ်ခုအဖြစ်တွေ့ရှိသည်။ မာရှယ်၏ PTZ ကင်မရာများသည် SDI နှင့် HDMI ထုတ်လုပ်မှုကိုကျွမ်းကျင်ရန်အတွက်ဗွီဒီယိုများပါသည့်ရလဒ်များအပြင်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အဝေးမှပရိသတ်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဗွီဒီယိုဖြေရှင်းချက်ကိုပေးသည်” ဟု Ospina ကဖြည့်စွက်သည်။ CV610-UB ကင်မရာသည် resolution အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အာရုံခံကိရိယာသည်အရည်အသွေးအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသိသာသောနှောင့်နှေးမှုမရှိသောအလိုအလျှောက်အာရုံစူးစိုက်မှုမြန်ဆန်သည်။ ၃၄၀ ဒီဂရီလွှမ်းခြုံမှုဖြင့် CV340-UB သည်စာသင်ခန်းနေရာတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ပြီးဆရာကိုအာရုံစူးစိုက်နေစဉ်အခန်းပတ်ပတ်လည်တွင်လှည့်ပတ်သွားလာနိုင်သည်။
ထို့အပြင် MXL ၏ AC-360-V2 USB မိုက်ခရိုဖုန်းသည်ကြည်လင်ပြတ်သားသောအသံကိုပေးသည်။ မာရှယ်၏ CV610-UB ကင်မရာနှင့်တွဲဖက်ပါကအသုံးပြုသူများကို AV ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးသည်။ “ AC-360-V2 မိုက်ခရိုဖုန်း ၁၂ လုံးပါသည့်အဖုံးနှင့် ၃၆၀ ဒီဂရီလွှမ်းခြုံနိုင်မှုသည်ပညာရေးဆိုင်ရာချိန်ညှိချက်များအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးကျောင်းသားများအားတက်ကြွစွာပါ ၀ င်ခွင့်နှင့်သင်ခန်းစာတစ်လျှောက်မေးခွန်းများမေးရန်ခွင့်ပြုသည်” ဟု Ospina ကဆိုသည်။ ကျောင်းသားတွေရော၊ ပညာတတ်ရောပါဆက်သွယ်နိုင်အောင်ယူဆောင်ပေးတယ်။
Era Electronica သည်ကိုလံဘီယာတစ်လျှောက် AV စနစ်များကိုပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက်ကုမ္ပဏီသည် MIC နှင့်ကင်မရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ဖောက်သည်များထံမှအပြုသဘောဆောင်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ကိုရရှိခဲ့သည်။ “ ရိုးရှင်းသော USB-connection ဖြင့် MXL နှင့် Marshall ဖြေရှင်းချက်များသည်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့လွယ်ကူစွာရောက်ရှိသွားစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသဘောကျနှစ်သက်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်” ဟု Ospina ကထပ်ပြောသည်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက AC-360-V2 ၏အသံအရည်အသွေးနှင့် CV610-UB ၏ဗွီဒီယိုကြည်လင်ပြတ်သားမှုသည်ဤထုတ်ကုန်များကိုလူအများစုမှထင်ရှားစေသည်။ ထို့အပြင်တပ်ဆင်မှုလွယ်ကူခြင်းကြောင့် MXL နှင့် Marshall တို့သည်ဤကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါတစ်လျှောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားရေရှည်အတွက်အဆင်ပြေစေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များဖြစ်စေသည်။ ”
Era Electronica သည် MXL နှင့် Marshall ကုန်ပစ္စည်းများကိုဈေးကြီးစွာဖြင့်ရရှိနိုင်သည့်ထိပ်တန်း-оф-လိုင်းထုတ်ကုန်များအဖြစ် ဆက်၍ ကမ်းလှမ်းသည်။ Ospina က“ ဒီဖြေရှင်းချက်တွေအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နည်းတာက MXL နဲ့ Marshall တို့အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ရရှိနိုင်သော high-end ရလဒ်များအတွက်နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ မာရှယ်နှင့် MXL တံဆိပ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြီးမြောက်ခဲ့သည့်အလုပ်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရောင်းအားတွင်ထင်ဟပ်ပြီး၎င်းအမှတ်တံဆိပ်များအပေါ်ဆက်လက်မှီခိုရန်နှင့်အနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အစုရှယ်ယာကိုတိုးချဲ့ရန်မျှော်လင့်သည်။ ”
MXL စားသုံးသူများနှင့်အသံဖမ်းများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသံထုတ်ကုန်ထုတ်လွှင့်, စာတိုက်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တိုက်ရိုက်အသံသည်စျေးကွက်၏ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ MXL Torrance, CA. အတွက်ရုံးချုပ်, မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်တစ်ဌာနခွဲဖြစ်ပါသည် အားလုံး MXL မိုက်ခရိုဖုန်းပေါ်တွင်အပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.mxlmics.com.
မာရှယ်သည်အရည်အသွေးမြင့်ပြီးစိတ်ချရသောဗီဒီယို၊ မာလ်တီမီဒီယာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသံလွှင့်ဗီဒီယို, Pro ကို A / V ကို, Pro ကိုအသံနဲ့ OEM application များအတွက်စနစ်များကို။ မာရှယ်အရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရစှနျ့မပါဘဲအလှနျတနျဖိုးမှာမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ conferencing, format နဲ့ converters အဖြစ်, ဆန်းသစ် POV နှင့် PTZ ကင်မရာများနှင့်အတူ Pro ကို A / V ကိုစျေးကွက်ထောက်ပံ့ထံအပ်နှံသည်။ မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်, Inc ကိုအမေရိကန်, တရုတ်, ဂျပန်, ကိုရီးယားနှင့်ရုရှားအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ မာရှယ်အီလက်ထရောနစ်, အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.marshall-usa.com.
မာရှယ်အီလက်ထရောနစ် MXL မိုက်ကရိုဖုန်း 2020-09-10
ယခင်: Sohonet သည် ClearView Pivot Lite ကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအားဖြင့် 4K Remote ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်အိမ်မှအဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်
နောက်တစ်ခု: IBC သည်ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံးဆုနှင့်ကမ္ဘာ့သတင်းအဖွဲ့အစည်းများကိုအသိအမှတ်ပြုသည်